China-Africa: "Migwagwa itsva yesilika ichavawo yeuto" - TELES RELAY
HOME » pasi rose »China-Africa:« Migwagwa itsva yechilika ichavawo yehondo »
Kwapera vhiki mushure mokutaura kweBeijing, vatungamiri veAfrica veChnumX vakaenda kumisasa yeVanhu's Liberation Army kuti vasimbise ukama nemauto eChina, anoona munyori wenyaya yedu.
Yakatumirwa pa 08 May 2019 pa 18h00 - Yatsvaga 09 May 2019 pa 10h42 Nguva yeku Kuverenga 2 min.
Vatungamiri Xi Jinping (China) uye Julius Maada Bio (Sierra Leone), Beijing, August 30 2018. POOL Yatsva / REUTERS
Chronicle. Africa yakabata pfungwa dzose pachikamu chechipiri cheSirik Roads muna April apera muBeijing. Iko chaizvoizvo nyika inofanirwa kubhadhara mari yakawanda uye inotarisa matambudziko makuru anokonzerwa nebasa guru rezvivako zvehupfumi pasi rose. Nzira yakatotanga kufamba yakakosha, sezvo munyika dze54 dzekondinendi, gumi nemashanu chete havasati vari nhengo dzekambani ye "migwagwa mitsvuku yekare", asi ivo vaingova vaviri chete kuti vave chikamu chayo pakutanga kwayo , mu 2013.
Kuwedzera kune 3 000 mishonga yemigodhi, 1 000 madhora emadhora emadhora (anenge ane mamiriyoni e900) uye gomo rechikwereti ... Uchapupu hwokuti izvi "Chikwereti chikwereti", sezvo hurumende yeAmerica inoshevedza iyo, ichokwadi chaizvo, mutungamiri weChina aifanira kubvisa chikamu chakanaka chezvikwereti, kunyanya muAfrica. Uye haisi yekutanga.
Verenga zvakare China inotarisa mhepo yechipiri nokuda kwayo "migwagwa yechilika" muAfrica
Pakati pe2000 ne2018, Africa ndiyo chaizvo iyo nyika inowanikwa zvakanyanya. Result: 72 kana chikwereti cancellations zvakanyorwa munyika matatu, rinomiririra anopfuura mabhiriyoni 2,2 mu zvikwereti ne China. In vatungamirire, Cameroon, izvo kubva 2001, aiva mana chikwereti nyora-offs, nokuti anokwana mamiriyoni 174, kusanganisira 78 2019 miriyoni. Zambia, Ghana, Sudan uye Zimbabwe vari pakati zvikuru nedambudziko dzomuAfrica kuburikidza Chinese chikwereti cancellations, nokuti tiri kupfuura chikwereti nyika uye kusimba mari.
Kana izvi zvikaita zvichionekwa zvakasununguka, izvo chaizvoizvo zvikamu zvitatu zvakaderera kune izvo zvakapiwa neFrance ... Izvi zvingave zvikonzero nei purogiramu yeBeijing yaiva mukana wekusaina mutsva mitsva yezvibvumirano.
Nzira yekureba kwenguva refu
China inofunga kuti yakanzwa vatsoropodzi. Kune avo vari kunetseka pamusoro pemutoro unorema wechikwereti, uri kuzivisa nzira itsva yemugwagwa, uyewo mapurogiramu anoremekedza zvikuru zvemagariro evanhu uye nezvezvakatipoteredza, huzhinji huri pachena kuvhura uye zvimwe kurwisana nehuori. Asi zvingave zvichinyatsoenderana nemitemo yenyika kunze kwekurasikirwa zvese zvakabatsiro zvepurogiramu inoshumira zvido zvayo pakutanga uye zvakanyanya here? Zvikamu zvipfumbamwe kubva kune gumi zvakanyatsogadzirwa nekambani dzeChinese uye zvingave zvisinganzwisisiki kuona kuti Mutungamiri Xi Jinping pano ari kuisa migwagwa yezvaanoda zvikuru.
Verenga zvakare Chinafrique: "Ngozi yekushandiswa kwemashoko emapoka eIslam anoparadza Africa"
KuBeijing, ikozvino, ichi chiitiko chikamu chegadziriro yekugara kwenguva refu yekugadza kuwanda kweChina muAfrica, zvose zvezvematongerwe enyika uye zvematongerwe enyika ... uye zvehondo. Kwapera vhiki mushure mokutaura kweBeijing, vamiririri ve45 vehondo dzeAfrica vakabatanidzwa - vakawanda vakangwarira - mumusangano wechipiri weSino Africa. Mwedzi mitanhatu chete mushure mekutanga kwekutanga, vatungamiri vakuru vekontinende vakaenda kuTianjin, kuBeijing nemapoka ezvidzidzo zvevanhu vevanhu revanhu rekudzivirira hurumende kusimbisa hukama pakati pehondo dzeChinese nemaAfrica.
Ichi chikamu chechirongwa chekare-chakavanzika che "Silk Roads of Security" umo China neAfrica vanovimbisa kusimbisa kubatana kwavo uye kuchengetedza mapurogiramu enguva yemugodhi inobvunzurudzwa nechisimba chikuru kwevhiki kare kuBeijing. Nzira yekuunza varwi mumutoro wevashandi veChina.
Sébastien Le Belzic yakaiswa muChina kubvira 2007. Anomhanya website yeChinafrica. info, magazini mune China-Africa nemari yakabuda.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/08/chine-afrique-les-nouvelles-routes-de-la-soie-seront-aussi-militaires_5459742_3212.html?xtmc=afrique&xtcr=8
TECH & TELECOM2,009